HYPERCAN: Duufaantii ugu xoogga badneyd ee jiri karta! | Saadaasha Shabakadda
Hypercan, waa magaca ay saynisyahannadu ku naanaysteen waxa noqon lahaa duufaantii ugu weyneyd ee Dhulka ka jiri lahayd, Kala-soocida qaybta 5 ee tilmaamaysa baaxadda ugu badan ee kala-soocidda duufaan sida ku cad miisaanka Saffir-Simpson. Weligeed ma dhicin, laakiin jiritaankeeda lama diidi karo, in kastoo tan loo baahan yahay, waa inaan ka horreynaa xaalado sax ah oo jira. Aragtida ayaa tilmaamaysa haddii xaaladaha noocaas ah ay jiri karaan, in Hypercan la abuuri karo, oo maya, diyaar uma nihin.
Hypercan waa Mega Hurricane leh 800km / h dabaylo, xawaare aad ugu dhow xawaaraha codka ee 1235km / saacaddii. Si aan fikrad u helno, waxaan lahaan doonnaa isla dabaylaha ebb ee ka soo baxa bambaanada atomiga, oo u dhow goobta uu ku qarxay. Dabaylahaasi waxay si isdaba joog ah u burburin lahaayeen wax kasta oo jidkooda ku jira, oo leh heer bahalnimo oo aan hore loo arag. Waxay umuuqataa inay aad u fogtahay suurtagalnimada in laga fikiro. Runtii waa sidaas, laakiin waxaa jira dhowr xaaladood oo si qumman suurtagal u ah oo dhici kara.
1 Shuruudaha Hypercan inay dhacdo
2 Khataraha ka imaan kara Hypercan
2.2 Cabbirka iyo nidaamka hawo-mareenka
Shuruudaha Hypercan inay dhacdo
Duufaantaan culus waxay ka dhalan kartaa isku darka heerkulka dusha sare ee badaha 48ºC. Waxay noqon laheyd inay aad ugu kulushahay meeraheena badaha iyo badaha si loo diiwaangaliyo heer kulkaas. Laakiin kaliya iyada oo volcano aad u weyn ay ka qarxeyso badda hoosteeda, oo sababaya inay biyuhu kululaadaan, waxay noqon lahayd mid ka mid ah sababaha keeni kara heer kulkaas wanaagsan ee samayskiisa.
Ikhtiyaar kale ayaa noqon lahaa kululaanaya dhicitaanka matoor weyn oo ku jirta biyaha, taasi sidoo kale waa suurtagal kale oo sababi karta heer kulka sare. In kasta oo suurtagalnimadaasi ka fog tahay. Waxa la duubay waa supervolcano ka qarxay biyaha hoostooda qiyaastii 250 milyan oo sano ka hor. Inta badan noocyada jira ee waqtigaas ayaa la baabi'iyay.
Kuleylka tartiib tartiib ah oo isdaba joog ah ee biyaha sababo isbedelka cimilada Inkasta oo heerkulka ugu sareeya ee diiwaangashan ee 35ºC ee biyaha uu yahay 13ºC laga soo bilaabo 48ºC oo loo baahdo, diirimaad joogto ah oo iyaga ka mid ah ayaa noqon kara cawaaqib kale. Markasta oo ay kululaadaan biyaha, waxaa suurta gal ah duufaanno iyo rabshado badan.
Khataraha ka imaan kara Hypercan
Kaliya kuma imaan karaan hal jiho, Hypercan waa dhacdo leh cawaaqib xumo u gaar ah xaddigeeda. Wixii intaa dhaafsiisan, waxay wax ka beddeli lahayd xaalado badan oo cimilada ah. Kuwa soosocda shaki la'aan waxay noqon doonaan kuwa ugu khuseeya.
Sidaan soo sheegnay, mid kamid ah waa dabaylaha waawayn ee dhici lahaa. Dabayl dhererkeedu dhan yahay 800km / saacaddii waxay ku jiri doontaa miisaanka Fujita-Pearson, heerka F9. Marka loo eego cabirkeeda, hadda waxaa jira miisaannadan:
Heerka F0 (dabaylaha 60/117 km / saacaddii): Fudud Laamaha geedaha ayaa jebiya, qashinka duulaya.
F1 (117/181 km / saacaddii): Dhexdhexaad Waxay jabin karaan marmarka, burburin karaan shiraacyada, dhaqaajin karaan gawaarida, rogi karaan gawaarida, maraakiibta quusin karaan, geedaha jebin karaan.
F2 (181/250 km / saacaddii): Tixgelin badan. Saqafyada guryaha qaarkood waa la kiciyey, isjiidka, basaska, iyo dhismayaasha daciifka ah qaarkood waa la dumin karaa. Dabayl noocan ah, gawaarida tareenka way qali karaan.
F3 (251/320 km / h): Xabaal Geedaha waa la rujiyay, gidaarada iyo saqafka sare ee dhismooyinka ka xoog badan sidoo kale waa la rujin karaa.
F4 (321/420 km / saacaddii): Burburinta. Tareenada, gawaarida xamuulka ah oo kor u dhaafaya 40 tan, ayaa hawada lagu tuuri karaa.
F5 (421/510 km / saacaddii): Aad u burburin. Iyadoo leh dabaylo la mid ah tamarta ay ku burburinayso bamamka atomiga ah. Dhismayaasha oo dhan dhulka ayaa laga jeexjeexay oo la qarxiyay.
F6 (511/612 km / saacaddii): Burburku wuxuu kudhowaad yahay mid aan macquul ahayn. Duufaan duufaan ah ayaa lagu diiwaangeliyay Oklahoma 1999 markii lagu jiray xilligii duufaanta iyadoo ugu badnaan la diiwaan geliyey 512km / saacaddii.
Baahnayn in la sheego, F9 wuxuu ka tagi lahaa meel cidla ah oo aad u badan, oo aynaan tilmaami karin ama aqoonsan karin.
Cabbirka iyo nidaamka hawo-mareenka
In kasta oo ay lahaan lahayd aag duufaan yar oo 25km ^ 2 ah, haddana hawadeeda ayaa gaari doonta meel aad uga sarreeya jawiga hawada marka loo eego duufaannada caadiga ah Nidaamka Hawada wuxuu ahaan lahaa baaxadda Mareykanka. Isha duufaanta waxay cabireysaa 300km dhexroor.
Biyaha kulul ee ay ka soo bilaabatay Hypercan, iyadoo taas lagu xisaabtamayo isbeddelka heerkulka biyaha ayaa ah geeddi-socod gaabis ah oo in badan ku sii kordhaya, waxay suurtogal u tahay inay keento hypercanes badan.
Intaa waxaa dheer, daruuraha hypercan ayaa gaari karay 30km oo dherer ah. Tani waxay sababi doontaa carqaladeynta lakabka ozone, maxaa yeelay molikulada biyaha ayaa la soo xiriiri doona waxayna abuuri doonaan falcelin halka ay ugu kala baxayaan moleekulada O2, iyagoo abuuraya sifeyn yar oo iftiinka ultraviolet ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » HYPERCAN: Duufaantii ugu xoogga badneyd ee jiri karta!
Sulfuric acid ayaa roobka ku di'i kara Dunida mahad Donald Trump
Waxaa inoo harsan 3 sano si aan uga fogaanno aafada cimilada